Shona | CCOG
Unofanira Kuchengeta Mazuva Mutsvene waMwari kana yemadhimoni mazororo?
Mazuva matsvene vs. dzakakurumbira Mazororo Pakati vakawanda mapoka vanozviti vaKristu, anenge zvose kuchengeta mamwe mazororo kana Days Mutsvene. Unofanira kuchengeta Mutsvene waMwari Days kana mazororo nemadhimoni? Zvinoita sokuti mubvunzo nyore nemhinduro nyore. Uye kuti avo vanoda kutenda Bhaibheri, panzvimbo dzakasiyana…